I-Youngster yakha imithombo emihle yemisebenzi nge-BLG - NAB Bonisa Izindaba nge-Broadcast Beat, Umsakazo Osemthethweni we-NAB Show - NAB Bonisa LIVE
Ikhaya » Izindaba » I-Youngster yakha ama-workflows anamandla nge-BLG
LONDON - 18 July 2019: Enye yezindlu eziphelile zokuqeda ukuphela kweLondon, i-Youngster, ihambisa ikhwalithi engaxiliswanga ngenxa yokuhamba komsebenzi okhethekile we-FilmLight. I-Youngster isebenzisa isethaphu esisha ukunikeza ukushintshaniswa okungahambisani nokuqukethwe okuphakathi kwe-Flame VFX, Avid ukuhlelwa kanye ne-Baselight ibanga lokufaka nokuqedela. Ukuqhutshwa komsebenzi we-BLG usuvele usetshenziselwa ukuthengiswa kufaka phakathi kwe-Treatwell no-Mulberry kanye namavidiyo omculo okwakuthandwa nguJoji, owokukhangisa kwakhe okungukuthi iSanctuary wathola phezu kwe-14 million hits ku-YouTube ezinsukwini ezimbalwa zokuqala.
Isakhiwo sokuqala se-Baselight sigcina imidwebo yekhamera yangempela kuyo yonke inqubo yokuthunyelwa kokukhiqiza, ukuthatha zonke izinqumo zokufaka nokuqeda njengemethadatha kufayela le-BLG. Ifayela elincane le-OpenEXR le-OpenGXR eliphathekayo liyisisekelo se-BLG yokuhamba komsebenzi, futhi ingasetshenziswa ukudala, ukubuyekezwa nokudlulisa ukubukeka phakathi kwe-Flashlight, i-Flame kanye Avid. Lokhu kuvumela noma yiliphi i-Flame noma Avid uhlelo olukwazi ukubona isithombe esifanayo sokuqala kabusha ibanga eligcwele, ngesikhathi sangempela, nje ngokushintshanisa i-compact BLG.
I-Youngster iyinhlangano ehlangene yokuzihlanganisa phakathi kwezwe elihola ukuhlela izindlu, i-Whitehouse Post ne-Quarry. Isungulwe ku-2016 inikeza izinsizakalo zokuqeda izinga eliphezulu kubazali bayo nakwamanye izinkampani zokukhiqiza. Lezo zindawo zifaka i-VFX nokuhlelwa kwe-intanethi: kokubili ama-Flame suites afakwe BLG ye-Flame, nayo yonke i-20 Avid amakamelo abe ne-Bokukhanya Avid ama-plugin, okuvumela amakhasimende ukuthi abone okuqukethwe okugcwele ngokugcwele kunoma yiliphi igumbi kulesi sikhungo.
UJim Bracher, owayengumqeqeshi omkhulu osemncane, owaqala ukuhweba kwakhe eThe Mill futhi wajoyina i-2018, uye wasebenzisa amathengisi, amafilimu emfashini, amavidiyo omculo, amafilimu amasha nama-documentary kanye nemikhiqizo kuhlanganise ne-BMW, NBC, I-Gucci, i-HP, ne-Guardian.
I-Bracher ithi, "Lokhu kuhamba komsebenzi kusho ukuthi singakwazi ukuthuthukisa ubukeka njengoba sihamba, nabaculi be-VFX nabahleli abafaka isandla, kunokubeka ibanga lokugcina ekunqunyweni okuphelile. Kusho ukuthi ngingasho ukuthi 'Nginesikhathi sokukwenza lokhu, wenza lokhu' kubalingani, uthola imiphumela emihle kunoma ubani onokutholakala.
"Umbhangqwana wokuthi ngamakhono amanga ase-Baselight ezintweni ezinjengezikhumba ezihlanzekile zesikhumba, esebenzisa i-Matchbox shaders, futhi usinikeza indlela yokubambisana yokuletha imiphumela emihle kakhulu, ikakhulukazi emisebenzini yokuthengisa esenzayo, lapho sibhekene naso ngaphansi kwengcindezi enkulu yesikhathi. "
UWolfgang Lempp, oyisikhulu esiphezulu se-FilmLight wathi, "Ukuqhuma komsebenzi we-BLG kubonakala kabanzi, kodwa i-Youngster ayifinyelele ukuba nayo yonke into ngaphansi kophahla olulodwa. Abasakazi kanye nezinkampani zokukhiqiza bavame ukusebenzisa i-Baselight for Avid, izindlu zentengiso zisebenzisa BLG for Flame. Lapha banokuvumelana okuphelele phakathi kwe-VFX, ukuhlela nokuqeda, okwenza kube nokusebenza okukhulu, kanye nokuqinisekisa imiphumela emihle kakhulu yokugcina ngoba wonke umuntu usekhasini elifanayo, ngaso sonke isikhathi. "
Ukuze uthole olunye ulwazi ngo-Youngster sicela uvakashele - youngster.london
Avid Isibani sokukhanya Ukuhamba komsebenzi we-BLG Ukufakwa kombala ifilimu izinsizakalo zokuqeda I-Flame VFX Jim Bracher Joji Ama-Marcomms we-MKM Ukuxhumana kweMKM Marketing I-Mulberry Sanctuary I-Mill IQuarry Treatwell I-Ultra HD Forum Iposi le-Whitehouse Wolfgang Lempp Youngster	2019-07-18
Ngaphambilini: I-Studio Technologies 'Isibonelo Soxhumano Somsindo we-5412 Esusiwe Umsakazi Wezemidlalo Ephezulu YasePoland
Olandelayo: Izinhlelo ze-KRK ziqala ukufakaza uhlelo lokusebenza lwezingoma zomsindo